သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: အိတ်ကလေး (၂)
အဲဒီနေ့မနက်က ရုံးအသွားမှာ ဂျူလီ့အတွက် ပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားတဲ့ ကျမချစ်တဲ့အိတ်ကလေးကို ယူသွားပါတယ်။
ကြိမ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ နောက်ထပ်အိတ်ကလေးကိုလဲ ယူသွားတယ်။ သူရွေးလို့ရအောင်။
ရုံးပေါ်ရောက်တော့ သူ့ဆီကို တန်းသွားပြီး
"ဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်း ပေးဖို့ယူလာတယ်နော်.. ညထဲက သန့်ရှင်းပြီးသား" လို့ ပြောတော့ ဂျူလီက ရယ်ကျဲကျဲလုပ်နေတယ်။
"ဒီအိတ်လဲယူလာတယ် ကြိုက်တာရွေးနော်" လို့...
ရင်ထဲကတော့ ကြိမ်အိတ်ကိုရွေးပါစေလို့ ဆုတွေတောင်းနေမိတယ်။
သူက အိတ်နှစ်အိတ်လုံးကို ကြည့်ပြီး နှစ်အိတ်လုံးကို အရမ်းသဘောကျနေတယ်။ သူ့မျက်နှာကတော့ မှိုရတော့မယ့်မျက်နှာနဲ့ပေါ့.... ဟွန်း။
ပြီးတော့ တစ်လုံးကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။
"မင်းအကြောင်းကို ဘလောဂ်တောင်ရေးလိုက်သေးတယ်" ဆိုတော့ အရမ်းအော်ရယ်ပြန်တယ်လေ။
"သွားမယ်" လို့ပြောပြီး ကျမ သက်ပြင်းချပြီးထွက်လာတော့ နောက်ကနေလှမ်းအော်ပြီး ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
"မင်းရဲ့ ဘလောဂ်ဂါရောင်းရင်းများကိုပါပြောလိုက်ပါ" တဲ့....
"I will guard it with full respect " လို့ပြောပါတဲ့....
ပြီးတော့ "ဘလောဂါတွေ ဘာပြောလဲ ပြန်ပြောပြပါ" တဲ့...
သူ့တွက် ကော့မန့်အင်္ဂလိပ်လို ထားပေးချင်တယ်ဆိုလဲ ထားခဲ့ပေးနိုင်ကြပါတယ်...
လောလောဆယ်တော့ မယ်မင်းကြီးမ အူမြူးလို့ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။
မမအိမ့်ချမ်းမြေ့ ရေ …… အဲဒီ အိတ်လေးကို ညီမလဲ သဘောကျတယ် ….. ။ ဂျူလီ ကို ပြောလိုက်ပါ သူ မကိုင် ချင်တော့တဲ့ တစ်နေ့မှာ မမအိမ့် လိုပဲ သေချာသန့်ရှင်းပြီးမှ ညီမဆီကို ပို့လိုက်ပါလို့ ….။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ … ။
Comment by နှင်းဟေမာ — July 9, 2009 @ 9:42 pm
မလေးရေ … မမေတော့ ၂ အိတ်လုံးကြိုက်တယ်။
မလေးလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်မျိုးနဲ့တွေ့တာ ဂျူလီ ကံကောင်းတာပဲ။
အိတ်ကလေးက ငွေကြေးအားဖြင့် မပြောပလောက်ပေမဲ့ ပိုင်ရှင်လက်ထဲမှာ သူ့တာဝန်သူ ကျေခဲ့တယ်နော်။
သူ့ကိုမြတ်နိုးတဲ့ ပိုင်ရှင်အသစ်လက်ထဲမှာလဲ တာဝန်ကျေနေဦးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Comment by မေဓာဝီ — July 9, 2009 @ 10:03 pm
Comment by မမွန် — July 9, 2009 @ 10:16 pm
She will be very happy to haveafriend like you.I believe that she won’t forget your kindness.
With the love of the Lord, Jesus Christ.
Comment by rose of sharon — July 10, 2009 @ 12:09 am
Comment by tawtharlay: — July 10, 2009 @ 2:36 am
ကြိမ်အိတ်လေးကြိုက်တယ် မလေး ။ အရောင်ငြိမ်ငြိမ်လေးမို.ချစ်တယ် ။
Comment by amayarko — July 10, 2009 @ 3:34 am
အစ်မရေ အိတ်ကလေးတော့ ပေးလိုက်ရပြီ…. အဟား စတာ။
You’re lucky to havealovely bag. I’d rather choose the alternate one in your place cos I think it’sahandcraft. Anyway, you’ve got the one you’ve wanted and I’m glad.
Comment by Phyo Evergreen — July 10, 2009 @ 5:34 am
First, I thought you would pick the handcrafted one (the real cute beige bag)but anyway I know you will take good care of it.
Ma Lay…Giving is better to receive. Bless your heart…..
Comment by Lynda — July 10, 2009 @ 9:51 am
မမွန်… ကြိမ်အိတ်ပါ ပါသွားတယ်မမွန်ရေ.. ဂျူလီနဲ့တွဲလုပ်တဲ့ တစ်ယောက်က သူ့ကိုအကျန်တောင်မပေးဘူးလား စကားနာထိုးတာနဲ့ ပေးလိုက်တယ်
နှင်းဟေမာ၊ မမေ၊ rose of sharon၊ amayarko၊ ကိုဖြိုး၊ လင်ဒါ... ဂျူလီ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ကော့မန့်တွေလာဖတ်ပြီး ပြောလိုက်ပါတဲ့.. သေချာသိမ်းမှာပါတဲ့၊ ကျန်တာတွေတော့ မလေး ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တယ်။
Comment by မလေး — July 10, 2009 @ 11:46 pm
မမရေ ကြိမ်အိတ်လေး ချစ်လိုက်တာ ငြိမ်လို့။ ဟိုအိတ်ကိုက မမ အရင်ပိုစ့်မှာထဲက ချစ်ပြီးသား ။ပေးပြီးပြီကိုး ။ ချစ်ဖို့ကောင်းအောင် သူတို့နေမှာပါ။
Comment by maylay — July 11, 2009 @ 9:38 pm
ဟား၂၂ … ဖွတ်မရ ဓားမဆုံး တဲ့ မလေး ….နောက်တာနော် …
Comment by westcoast22 — July 12, 2009 @ 11:41 pm
မမနွေအူးးး က မနိုင်းဆီလာတဲ့ ငှက်တို့ ဆောင်း မင်း လွန်း ကြာ တို့နဲ့ သိတဲ့ နွေအူးပါလား ဟုတ်ရင် ညီမ ဆီလာပြန်ပြောပါနော် ညီမ အမဘလော့ဂ်ကို လိုက်ရှာနေတာ မဟုတ်လဲ မဟုတ်ကြောင်းလေး ပြောပေးပါနော် ငှက်ဆိုတဲ့ အတိုင်း ခြေရှည်ပါတယ် အမက လင့်ခ် မထားခဲ့တော့ သိဘူးပေါ့ရယ် နော် ဘိုင်
Comment by ငှက်ကလေး — July 13, 2009 @ 5:19 am
မေလေး.. မလေးက ကြိမ်အိတ်မကြိုက်ဘူး တကယ်က ဒီပုံတိုင်းဆို ဒီနိုင်ငံမှာ အိတ်ရောင်းစားပြီး သူငှေးဖြစ်မလားမသိဘူးနော် :D
westcoast22 … ဟိုလို မိုးကာအိတ်မျိုး ပြန်လိုချင်တယ်။ အဲဒီဘက်မှာရောင်းလား မြန်မာဆိုင်တွေမှာ။ စာတွေလာလာဖတ်တဲ့တွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါ၏။ အဆင်ပြေလား။ ဘာတွေလုပ်နေလဲ
ငှက်ကလေး... အမ ငှက်ကလေးဆီဗုံးမှာ အကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။ ဟိုတုန်းကမသိခဲ့သော်လည်း ငှက်ကလေးနဲ့ အမ ခုသိပြီလို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ နွေအူး မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ် ငှက်ကလေး
Comment by မလေး — July 13, 2009 @ 7:56 am
မမအိမ့်ရေ ညီမက ကြိမ်အိတ်ကလေးကို ပိုကြိုက်တာ။ သူရွေးပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းနေမိတာ (ဟိုအိတ်က မမအိမ့် ပိုချစ်လို့လေ)။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတော်တော်ပျော်သွားမှာပါ။ သူငယ်ချင်းအပေါ်မှာ သိပ် Generous ဖြစ်တဲ့ အစ်မလည်း နောင်ကို အိတ်လှလှတွေ အများကြီး ထပ်ရဦးမှာပါ။
Comment by ရွှေပြည်သူ — July 14, 2009 @ 5:44 am
Ma gyi yay…
Just give to her for you not problem right ?
Because is (you are myanmar) can buy anytime…..
You made people happy …. you can get too more than her
….that is natural laws….
Take note dear sister…..
Comment by mg phyo thet aung — July 22, 2009 @ 6:09 am
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 5:27 PM